CAN 2019: Hoos-u-dhac weyn, Senegal ayaa aad uga fogaan doona, sida uu sheegay Omar Daf - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS CAN 2019: Hoos-u-dhac weyn, Senegal ayaa aad uga fogaan doona, sida uu sheegay Cumar Daf
Wareysi uu la yeeshay Isboortiga maalinlaha ah, oo ah kaaliyihii hore ee macalinka qaranka, Aliou Cisse, Cumar Daf, waxa uu si maldahan u sheegay in uu aad u hooseeyo, kooxdan ka socota Senegal ayaa aad uga fogaan doonta oo ka hadli doonta CAN 2019 ee Masar.
"Waxaan arkeynaa koox dabeecad leh, oo ciyaareysa kulan kasta. Waa in aan sii wadnaa inaan la shaqeyno hoos-u-dhac weyn oo aan ku dhigno in waqtiyada la soo dhajiyay ay yihiin kuwo aad u muhiim ah. Haddii aan sii wadno dadaalkan, kooxdani aad ayay u fogaan doontaa oo ka hadli doontaa, "ayuu yiri daaficii hore ee Lions.
Sida laga soo xigtay Daf, Koobka Afrika waxaa loo balan qaaday dhamaan kooxaha u qalma. Senegal inkastoo uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican, lakiin ma jiro wax la jecel yahay. Dhamaan tartamada waa isku mid. Taasi waa sababta aan u sheegi doono inagoo raaci doona sharaf badan.
Daf ayaa ugu yeeray Senegal in uu ka dambeeyo kooxdan, waxayna sii wadaan taageeradaas. "Waxaan qabaa in aan ku biireyno ciidamo aan ku guuleysan karno koobkan. Dhamaan dadka reer Senegal waa in ay ku biiraan ciidamada si ay u dhacaan. Waxaan haysanaa macquul, waxaan heysanaa koox aad u fiican. Waana inaad kaliya diirada saartaa oo midaysan, "ayuu kula taliyay.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://foot221.com/can-2019-avec-beaucoup-dhumilite-le-senegal-ira-tres-loin-selon-omar-daf/
Bush iyo Saameyntii wajahay NYCFC waxay ku xidhnayd 0-0